China namboarina lasitra plastika ho an'ny fiara, latabatra ao anaty latabatra, bobongolo plastika ho an'ny masinina kafe, ireo mpamokatra bobongolo am-paosy, teny nindramina - Dongguan Fannuo Fitaovana plastika CO.LTD
Lasitra plastika ampiasaina amin'ny fitsaboana
Lasitra plastika fiara
Auto lasitra plastika
Lasitra plastika fitetezana fiara
Bobongolo plastika fanafanana rivotra otomotif
Lasitra plastika jiro any ivelany any ivelany
Lasitra plastika jiro ao anaty fiara automotive
Ny lasitra lovia
Fork sy lasitra antsy
Peripheraly finday sy solosaina
Fitaovana any amin'ny birao
Puzzles sy kilalao siansa
Ny lasitra headset
Bobongolo akorany penina
Bobongolo ho an'ny kojakoja ilaina amin'ny fitaovana ao an-trano
Lasitra plastika manadio
Bobongolo plastika akustika
Lasitra plastika robotic
Lasitra plastika ho an'ny mpanasa lamba
Lasitra plastika ho an'ny masinina kafe
Fitaovana mamindra otrikaretina
Headphones amin'ny lalao
Volom-borona fisakafoanana sakafo fisakafoanan'ny ankizy PP
Kitapo latabatra ho an'ny ankizy
Dongguan Fannuo Fitaovana plastika CO.LTD
Fannou Niorina tamin'ny 2007, nanomboka nitatra tamin'ny alàlan'ny fahazoana marimaritra iraisana maro. Asa lehibe: Famolavolana bobongolo, R & D, Famokarana ary serivisy. Indrindra ho an'ny fitaovana kely, indostrian'ny serasera, ny haitao manan-tsaina, ny indostrian'ny elektronika mpanjifa, ny plastika Silicon, ny vy, ny fivorian'ny vokatra elektronika ary ny vokatra manodidina azy. Haben'ny orinasa: Misy toha-pamokarana efatra any Shina, miaraka amin'ny fizarana lozisialy matihanina sy ny fahaizan'ny serivisy ao an-trano sy any ivelany. Ny iraka ataontsika: ho mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria (ao anatin'izany ny mpanjifa, ny mpiasa, ny tompon-trosa ary ny mpiara-miombona antoka). Headcount: mpiasa 428, ao anatin'izany ny mpamorona vokatra 35.
Tady herinaratra tsy tantera-drano
Chopstick an'ny ankizy
Ho an'ny fanontanina momba ny vokatra na pricelist anay dia mba apetraho aminay ny mailakao ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay. Manana bobongolo plastika fiara izahay, bobongolo eo amin'ny latabatra, bobongolo plastika ho an'ny masinina kafe, ny bobongolo headset
 No.37 Park Road, tanàna Banxianshan, Hengli, Donggun, Dongguan CIty, Provice Guangdong
© Copyright 2019-2021 Dongguan Fannuo Fitaovana plastika CO.LTD